Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Fifidianana Mpanoratry ny Taona - Ireo mpanoratra hifaninana
Ireo Mpanoratra mifaninana
Ravorombato Ony Lantoarimamy sy Poète Rebelle no mpanoratra mifaninana hahazo ny anaram-boninahitra Mpanoratry ny Taona 2018.
Indro aroso anareo eto amin'ity pejy ity ny mombamomba azy ireo.
Santionan'ny Asa sorany
- Hazakazaky ny fo tena tia: [PDF]
- Rivodoza tsy nahavanona: [PDF]
Ravorombato Ony Lantoarimamy na Ravorombato dia Mpanoratra, Mpampianatra, Mpikabary. Filohan'ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo. Manana ny mari-boninahitra Chevalier de l’ordre des arts, des lettres et de la culture.
Teraka ny 18 ôktôbra 1975 tao Befelatanana.
Zanaky: RAVOROMBATO Claude Bernard (efa maty) sy RASOAVONJENA Onimiadana.
Monina: Faritra Itasy, Distrika Arivonimamo, Kaomina Arivonimamo Ambonivohitra.
1996: Nanomboka nanoratra.
1998: Nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana tononkalo, namaly ny hiran'i Kiaka Fitia nindramina, nokarakarain'ny Radio Freqence Plus.
1998: Nahazo ny laharana faharoa tamin'ny fifaninanana tononkalo, andron'ny mpifankatia, nokararain'ny Radio Frequence Plus.
2004: Niditra ho mpikambana Havàtsa-UPEM.
2007: Mpitantsoratry ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo.
2016: Filohan’ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo.
2017: Nahazo ny mari-boninahitra Chevalier de l'ordre des arts, des letters et de la culture.
2018: Nahazo ny laharana faharoa tamin'ny fifaninanana tantara fihaino, nokarakarain'ny Radio Fahazavana.
2004 hatramin'izao: Nahasoratra tantara fihaino tsy latsaky ny 100, miampy sombintantara sy tononkalo.
Hetsika nisongadina nataony tamin'ny 2018
- Tantara fihaino Noro - Record Madagascar.
- Tantara fihaino Taratasin'i Dada - Skyone Radio.
- Famakiana ny sombintantara nitondra ny lohateny hoe: Hazakazaky ny fo tao amin’ny RNM ho fanamarihana ny andron’ny mpifankatia.
- Tantara fihaino Ilay malalako tsy foiko ho fanamarihana ny fetin'ny mpifankatia - Aceem Radio.
- Tantara fihaino Gadra-pitiavana - Aceem Radio.
- Tantara fihaino Rainikoto sy Ramanana - Aceem Radio.
- Tantara fihaino Ambodia fiaina - Skyone Radio.
- Tantara fihaino Nangina tsy niteny, moa maninona ary? … Nandinika ny lasa ho fanamarihana ny tolona 1947 - Record Madagascar.
- Tantara fihaino Fitiavana marina ve sa …? - Radio Fahazavana.
- Tantara fihaino Sarobidy amiko ianao - Radio Fahazavana.
- Hetsika niarahana: Nitarika ny antsantononkao niarahana tamin'ny Havatsa-UPEM Arivonimamo, fanasana avy amin'ny SAMPATI FJKM Arivonimamo ho fanamarihana ny andron'ny Poezia.
- Tononkalo Hajao ny vehivavy ho fanamarihana ny andron'ny vehivavy, fanasana avy amin'ny Solombavambahoaka voafidy tao Arivonimamo, nantsaina teo anoloan'ny Kaomina Arivonimamo Ambonivohitra
- Tantara fihaino Fisaonana hafa - Record Madagascar.
- Tantara fihaino Didohan’i Dada - Radio Fahazavana.
- Tantara fihaino Zefa mpanao lakozia - Radio Don Bosco.
- Sombintantara Ahy izy, ahy irery, nivoaka tao amin'ny Takelaka Tsara Soratra, laharana 002.
- Nampandray anjara ny mpikambana Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo (Raozimainty sy Tsiresy) tao anaty fandaharana Soratra sy Teny, raiso ka vakio - RNM.
- Atrikasa nandritra ny Sabotsy telo tao Arivonimamo ho fanamarihana ny Iray volan'ny teny Malagasy:
Sabotsy 2 Jona: Niarahana tamin'i Hobiana,
Sabotsy 9 jona: Niarahana tamin'i Manjato,
Sabotsy 16 jona: Atrikasa notarihany mahakasika ny fomba fanoratana tantara fihaino.
- Tantara fihaino Odiako tsy jerena - Radio Fahazavana.
- Nampandray anjara ny mpikambana Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo (Heeso sy Miary Fanahy) tao anaty fandaharana Fanahy mirenty teny - RNM.
- Nampandray anjara ny mpikambana Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo (Ihangy sy Nivoahangy) tao anaty fandaharana Soratra sy Teny, raiso ka vakio - RNM.
- Fitarihana Takalo mahakasika ny tononkalo niarahana tamin'ny mpikambana Havàtsa-UPEM Arivonimamo.
- Nampandray anjara ny mpikambana Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo (RAMI sy Antsa Miangaly) tao anaty fandaharana Soratra sy Teny, raiso ka vakio RNM.
- Nitarika ny alin'anoka fanaon'ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo isan-taona.
- Nikarakara ny atrikasa mahakasika ny Fitsipika sy Tsipelina ho an'ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo izay nanafarana an’i Fanja Razafimamonjy na i Fanja Razah.
- Tantara fihaino Eto am-pamaranana ny dia - Aceem Radio.
- Nandray anjara tamin’ny famakiana tononkalo tao amin’ny RNM, fandaharana Fanahy mirenty teny niaraka tamin'i Hobiana.
- Nampandray anjara an’i Hobiana, Filoham-boninahitry ny Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo tao anaty fandaharana Soratra sy Teny, raiso ka vakio - RNM.
Fiantsana tononkalo natao tany amin’ny FJKM Ambohitraivo Imeritsiatosika sady ho fanamarihana ny faha-66 taona ny Havàtsa-UPEM Foibe izay niarahana tamin'ny Fikambanana Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo.
- Tantara fihaino Tsy afa-misaraka - Record Madagascar.
- Tantara fihaino Tsy ho fantany izany - RNM.
- Nampandray anjara ny fikambanana Havàtsa-UPEM Sampana Arivonimamo tamin'ny alalan'ny fampirantiana natao tao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely izay nokarakarain'ny Havàtsa-UPEM Foibe.
- Nandray anjara tamin'ny fampirantiana nokarakarain'ny Havàtsa-UPEM Foibe tao amin'ny Tahala Rarihasina Analakely.
- Nivoaka tao amin’ny Takelaka Tsara Soratra ny sombintantara Hazakazaky ny fo.
- Tantara fihaino Ho anao mandrakizay - Radio Don Bosco.
- Tantara fihaino Ilay alina fahatelo - Radio Skyone.
Loka sy mari-pankasitrahana azony tamin'ny 2018
Loka faharoa tamin'ny fifaninanana tantara fihaino Lazaiko anao ny fahatsarany nokarakarain'ny Radio Fahazavana, izay nahazoana mari-pankasitrahana sy amboara ary boky maro isan-karazany (Novambra 2018).
Taiza mitongilana: [PDF]
Tsy hanambady aho: [PDF]
RASOANIVO Faralalaina Elia Olsenie, 22 taona ary mbola mpianatra izy.
Olsenie no fiantso azy fa Poète Rebelle no anaran-tsehatra nosafidiny manokana hisalorana ao anatin'ny tontolon'ny slam-poezia, izay mahalaza ny toetoetrany sy ny endrikendriky ny asa soratra avoakany.
Poète rebelle satria zava-misy mandonandona sy teny mavesabesatra no avoakany sy ampiasainy, ary mba tsy ho tampoka be amin'ny mpamaky sy ny mpihaino ny fihainoana azy.
Mpanoratra hatramin’ny fahazazany ary naniry ny hahazo sehatra ahafahany hizara ny fomba fijeriny amin’ny alalan’ny asa-soratra izy ka mifandraika aminy tsara ny fombafomban’ny slam-poezia izay fiantsana tononkalo an-tsehatra.
Ny mampiavaka azy amin'ny namana mpanoratra sy/na slameurs hafa, dia ny fiteny ampiasainy. Mampiasa fitenim-paritra ary manandratra avo ny fiteny avy any antsimon'ny nosy iny izy satria lehibe tany amin'iny faritr'i Toliary iny, noho izany, manafangaro ny fitenim-paritra sy Malagasy ôfisialy ary teny vahiny anatina asa soratra iray.
Ny tanjony dia ny hampiroborobo ny asa soratra malagasy ary hitondra avo ny teny sy ny kanto malagasy, indrindra indrindra fa ny hakanton'ny fiteny avy any antsimo.
- Ny taona 2010 izy no niaka-tsehatra voalohany tamin’ny fifaninana slam-poezia izay nisoloany tena ny sekoly nianarany ary nibatany ny laharana voalohany tamin’ny sokajy nisy azy. Nanohy ny diany ao anatin’io sehatra io izy ary nandrombaka anaram-boninahitra maromaro amin’ny fifaninana maro samihafa izay nandraisany anjara.
- Mpitarika ny atrik’asa slam-poezia tao amin’i Alliance Française de Tuléar nandritry ny taona 2014.
- Nampanao atrik’asa maromaro teto Antananarivo ihany koa: ho an’ny ankizy tezain’ny fikambanana AINA ENFANCE & AVENIR sy ny fikambanana Teach For Madagascar (TFM) sns …
- Niara-niasa sy naira-niventy niaraka tamin'ny namana mpilalao slam maromaro.
- Mpanolotra ny fandaharana AKORY NOW tao amin’ny tambazotra Faebook.
- Voantso hanao tononkalo mikasika ny hetra tamin’ny lanonam-panokafana ny colloque international sur les finances locales tamin’ny 8 septambra 2017 ary mbola voantso tamin’ny lanonam-panokafana ny fihaonam-ben’ny Malagasy am-pielezana (Forum de la Diaspora Malagasy) tamin’ny 26 Oktobra 2017
- Nandray anjara,namelabela-kevitra tamin'ny Kônferansa Momba ny Soratra andiany voalohany (KMS 2017), kônferansa nokarakarain'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko tamin'ny 25 Novambra 2017. Lohahevitra novelabelariny tamin'izany: Ny asa soratra sy ny fanatontoloana.
- Niara-niasa niaraka tamin’i Prodécid GIZ, UNICEF, OIF, Présidence de la république malagasy sns …
Ny loka efa azony (2010 - 2017)
- 1er prix: printemps des poètes, tournoi inter-établissements, catégorie collège. (mars 2010)
- 3e prix : Concours lecture de poèmes. (février 2013, Alliance française de Tuléar).
- 1er prix: tournoi sur l'égalité hommes-femmes. (11 mars 2017, CGM).
- 3e prix: Tournoi régional Tana (Slam Poetry Individual Contest,septembre 2017,CGM).
- Nisehatra teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha nandritry ny fifampiarahabana tratry ny taona.
- Nivoaka ny vidéo-clip voalohany Hetra izay niarahana natao tamin'i Prodecid GIZ. (Azo jerena any anaty YouTube sy Facebook.)
Fandraisana anjara tamin'ny Zarafanahy hetsika nokarakarain'i Faribolana Sandratra, sehatra niarahana tamin'ny poeta maro isan-karazany.
Fiseharana tamin'ny Sommet de la coopération franco-malgache.
- Modely, nanentana ary mpitsara tamin'ny fifaninana slam-poezia momba ny herisetra mianjady amin'ny ankizy niarahana tamin'i UNICEF.
- Voix off, slam fanentanana ady amin'ny tazomoka (UNICEF).
- Fandraisana anjara slam mandritry ny Conférence sur la lutte contre l'extrémisme, Hôtel Colbert, niarahana tamin'i OIF (24 Jona).
- Nisehatra ary nanentana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha mandritry ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena (26 Jona).
- Fiaraha-miasa tamin'i AKORY NOW namoahana ilay vidéo Ny filoham-pirenena mety aminay.
- Fandraisana anjara slam mandritry ny JADDL, Ranomafana (Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local) niarahana tamin'i Prodecid GIZ.
- Fandraisana anjara slam, tamin'ny fankalazana ny faha-30 taona niakaran'i Bodo an-tsehatra, niantsana ny tantaran'i Bodo sy ny zanany anaty slam (30 Aogositra).
Asa soratra nisongadina navoakany tamin'ny 2018
Maro ny asa soratra nosoratany tamin'ny 2018. Santionany ihany ireto ambany ireto:
- Poezia mitory ny kolikoly (Aogositra), nantsaina tany Ranomafana mandritry ny JADDL, manoloana manam-pahefana maro,
- Vita tantara (Aogositra),
- Zaza natsangana (30 Septambra), nantsaina tamin'ny fampisehoana nanamarihana ny faha-30 taon niakaran'i Bodo an-tsehatra,
- Slam-p, na Salamo natao slam (Oktôbra),
- Azafady ah mama (Nôvambra),
- Jôkera, tsy jôkera (Nôvambra),
- Mama tsy mivaky loha, nantsaina nadritra ny slam nasionaly,
- Nahoda môla, nantsaina nadritra ny slam nasionaly,
- Tsy hanambady aho, nantsaina nadritra ny slam nasionaly,
- Ampela, vehivavy, nantsaina nadritra ny slam nasionaly.
Rakitsary niarahany tamin'i Akory Now tamin'ny 2018
- Malagasy mandray andraikitra (15 Febroary).
- Litika Pôly (26 Febroay).
- Fizarazaran'ny toe-tsaina malagasy (11 Martsa).
- Ny fisia maha-izy ny gasy (11 Aprily).
- Namako ianao (01 Jona).
- Nanonofy aho, teto Madagasikara … (28 Jona).
- Ny filoham-pirenena mety aminay … (18 Jolay, nivoaka tamin'ny fahitalavitra ihany koa).
- Tompon-dakan'Antananarivo tamin'ny fifaninana rezionaly nisafidiana ireo solontenan'Antananarivo amin'ny slam nasionaly (03 Nôvambra, IFM).
- Tompon-danka slam nasionaly andiany fahasivy, sokajy Slam collectif niaraka tamin'i Conan sy Andriamisetra (08 Desambra, IFM).